यी फलफूल खाली पेटमा खाँदा फाइदाभन्दा नो’क्सान धेरै।
काठमाडौं : फलफूलको सेवन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । स्वस्थ शरीर राख्नका लागि फलफूल खान आवश्यक मानिन्छ । तर, केही फलफूल खाली पेटमा खाँदा फाइदाभन्दा नोक्सा’न बढी हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
खाली पेटमा कैफि’नयुक्त खाद्यपदार्थ सेवन नगर्न पनि भन्ने गरिन्छ । तर, केही फलफूल पनि खाली पेटमा खाँदा हाम्रो शरीरलाई नोक्सा’न ¥याउने गर्दछन् । सबै फलमा केही न केही स्पेसल तत्व पाउने गरिन्छ । जसको लाभ हाम्रो स्वास्थ्यलाई हुने गर्दछ ।
तर, खाली पेटमा खाएको फलफूल हानि’कारक हुन सक्छ ।
यदि तपाईंले खाली पेटमा एसि’ड भएका फलफूल खानुभयो भने स्वास्थ्यलाई हानि पु¥र्‍याउँछ । त्यही यदि तपाईंले धेरै गुलिया फल बिहानको समयमा खानुभयो भने शरीरमा सुगर लेबल बढ्छ ।
जसले तपाईंलाई मधुमेहजस्तो रोगको खत’रा हुन सक्छ ।
आउनुहोस्जानौं कुन-कुन फलहरू खाली पेटमा खान राम्रो मानिँदैन ।
आँपलाई फलको राजा भन्ने गरिन्छ । हामी यतिबेला आँपको सिजनको अन्त्य’तिर छौं । विज्ञहरू भन्छन् कि आँपलाई कहिल्यै पनि खाली पेटमा खानुहुँदैन । किनकि आँपमा सुगर पर्याप्तमात्रामा पाइन्छ । जसलाई खाली पेटमा खाँदा ब्लडसुगरको लेबल ती’व्ररूपमा बढ्छ । यसले फाइदाभन्दा तपाईंलाई नो’क्सान बढी गर्दछ ।
यो नासपातीको मौसम पनि हो । यतिबेला प्रशस्तमात्रामा नासपाती पाइने गर्दछ । नासपातीमा फाइबर पाइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यदि तपाईंले खाली पेटमा नासपाती खानुभयो भने पेटमा भएका श्लेष्म झिल्लीलाई क्षति पु¥र्‍याउँछ । जसले हाम्रो शरीरको डाइ’जेस्ट सिस्टममा ख’राब गर्न सक्छ । त्यसैले नासपातीलाई पनि खाली पेटमा नखान सल्लाह दिने गरिन्छ ।
लिची फल धेरैलाई मन पर्छ । यो फल पनि खाली पेटमा नखान विज्ञहरू सल्लाह दिन्छन् । यसमा पनि सुगर धेरै हुने भएकाले खाली पेटमा नखाने सल्लाह दिइन्छ । यसले शरीरमा तीव्ररूपमा ब्लड सुगरको लेबल बढाउने गर्दछ । खाली पेटमा लिची खाँदा पेटमा ग्यासको समस्या पनि आउन सक्छ । साथै पेट दुख्ने गर्दछ । त्यसैले खाली पेटमा लिची नखाने सल्लाह विज्ञहरू दिन्छन् ।
केरा सबैलाई मनपर्ने फलफूल हो । प्रायः सबै मौसममा सजिलै पाइने केरा खाँदा जति मिठो छ, त्यति नै स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त लाभदायी मानिन्छ । नियमित एक कोसा केरा खाने गर्नाले शरीर स्वस्थ रहनुका साथै शरीरमा काम गर्ने ऊर्जासमेत बढ्छ । केरामा प्रशस्तमात्रामा सुगर र फाइबर, थाइमिन, नियासिन र फोलिक ए’सिड, भिटामिन ए र बी पाइन्छ, जुन हाम्रो शरीरका लागि नभइनहुने तत्व हुन् ।
धेरै मानिसहरू बिहान खाली पेटमा केरा खान मन पराउँछन् । केही त यसैलाई आफ्नो ब्रेक’फास्ट पनि मान्ने गर्छन् । तर, यसरी बिहानै केरा खानु स्वास्थ्यका लागि लाभकारी नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । केरामा म्याग्नि’सियमको मात्रा अत्यधिक हुने गर्दछ । जोे खाली पेटमा खाँदा ब्ल’ड फ्लो बढाउँछ । ब्लड फ्लो बढ्नाले म्याग्ने’सियमको मात्रा बढ्छ जुन मुटुका लागि खत’रनाक हुन सक्छ ।
माथि पनि चर्चा गरिसक्यांै कि ए’सिड भएका फल खाली पेटमा खानुहुँदैन भनेर । यस्तै अंगुर पनि एक साइट्रस फ्रुट हो जसमा पर्याप्तमात्रामा एसिड पाइन्छ । यसलाई खाली पेटमा सेवन गर्नाले तपाईंलाई ग्यास्ट्रिक, अल्सर र पेटमा जलनको समस्या आउन सक्छ । पेटमा ग्यास बन्नुका साथै मु’टुसम्बन्धी रोगीले यसलाई बिहान खाली पेटमा खानुहुँदैन ।
खाली पेटमा कहिल्यै पनि सुन्तला नखान विज्ञहरू सल्लाह दिन्छन् । किनकि यसमा भिटामिन ‘सी’ को मात्रा धेरै हुने गर्दछ । यसमा पनि अंगुरमा जस्तै रहेको साइट्रिक एसिडले पेटमा जलन उत्पन्न गर्दछ । त्यसैले राम्रो हुन्छ कि ब्रेक फास्टपछि नै सुन्तला सेवन गरौं ।
२०७८ भाद्र १३, आईतवार ०१:२५ गते 1 Minute 277 Views
फ्राइ गरिएको चिकेन र माछा खानुहुन्छ भने मृ’त्यु सम्मको जोखीम !
मधु-मेह र उच्च रक्त-चाप बाट बच्न खाने गरौं यी ५ चिजहरु !
हरेक दिन काजु खानुको १२ फाइदाहरु जान्नुहोस ।